Iindaba - Izinja zokulala kwindawo
Wonke umnini-silwanyana ufuna ukwazi okungakumbi ngezinja zabo, malunga nenja abayithandayo yokulala. Izikhundla zezinja zilala kuzo, kwaye ixesha abalichitha belala linokubonisa okuninzi malunga nendlela abavakalelwa ngayo.
Nazi ezinye iindawo zokulala eziqhelekileyo kunye nokuba banokuthetha ntoni.
Ukuba uhlala ubona inja yakho ilele kule ndawo yokulala. Oku kuthetha ukuba baziva bekhululekile kwaye bekhuselekile kwindalo yabo. Ezi zinja zihlala zonwabe, zingakhathali, kwaye zithembeke kakhulu. Esi sikhundla sishiya imilenze yabo ikhululekile ukuba ihambe ngexesha lokulala, ukuze ubone ukungcangcazela kunye nokukhaba kwemilenze kwinja elele ngecala.
Esi sithuba sokulala siqhelekile.Kwindla nase busika iinyanga xa imozulu ipholile, izinja zilele ngale ndlela, ukunceda ukugcina ukufudumala.
Ukutsalwa ngaphandle kwiTummy
Izinja ezilele kule ndawo, iingalo nemilenze yazo yoluliwe kwaye zizibeke phantsi, zihlala ziluphawu lomlingiswa olungileyo, zihlala zinamandla, kulula ukukhuthaza kwaye zonwabile, kwaye le ndawo yokulala ixhaphake kakhulu kwiinjana. Isikhundla sokhetho lwabantwana abalalayo xa bedlala kwaye bafuna nje ukuzimela phantsi apho bemi khona.
Ngasemva, Paws Up Emoyeni
Ukulala ngesisu esivelileyo kunceda inja ipholile njengokugoba kwibhola kungagcina ubushushu. Ukubhengeza le mimandla yindlela entle yokubetha ubushushu kuba uboya bunciphile esiswini kwaye iinyama zibambe amadlala okubila.
Ikwayindawo ebonisa ukuba inja ikhululekile, ishiya ezona ndawo zibuthathaka kwaye kunzima ukufikelela ezinyaweni ngokukhawuleza Inja enokuthi ingabi nalo ukhathalelo lwehlabathi iya kule ndawo. Le ndawo yokulala iqhelekile kwiinyanga zasehlotyeni.
Ezi zinja zikhetha ukulala nabanini bazo, kuhlala kukhuselekile ukucoca, ukudibanisa, ukuhlamba kunye nokugonywa.